"Education for Myanmar Youths": May 2009
(ရေးသားသူ - S.S.)
E-Learning ဆိုတာမှာ "E" ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ "Electronic" ကိုရည်ညွန်းပါတယ် ။ e-learning နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ အမြောက်အမြားထဲက European e-learning Action Plan မှ e-learning ကို အောက်ပါအတိုင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ် ။
.. the use of new multimedia technologies and the internet to improve the quality of learning by facilitating access to resources and services as well as remote exchanges and collaboration (COM, 2001: 2)
လူတော်တော်များများက e-learning ကို online-learning နဲ့ထူးမခြားနားလို့ ကောက်ချက်ချတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကောက်ချက်ချသလို အဲဒီသင်ကြားရေးပိုင်းနှစ်ခုဟာ အတော်လေးတူညီတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာခွဲခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ...
- သင်ကြားသူနဲ့သင်ယူသူကြား မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုမျိုးမရှိဘဲ ...(အဝေးရောက်သင်တန်း - distance learning - ဆန်ဆန်)
- အင်တာနက်တခုတည်းကိုသာကြားခံပြီး ...
- သင်ကြားရေးပိုင်းမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများ (electronic tools) ကိုအသုံးပြုပြီး ...
- သင်ကြားသူနဲ့သင်ယူသူကြား မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုမျိုးလည်း ရှိနိုင်သလို
- သင်ကြားရေးပိုင်းမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများ (electronic tools) နဲ့
- အင်တာနက်ကို သင်ကြားရေးပိုင်းအတွက် လိုအပ်သလိုအသုံးချပြီး ...
ဒါကြောင့် e-learning မှာအဓိကပါဝင်တဲ့အရာတွေကတော့ အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာ (technology) နဲ့ အင်တာနက် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ (Technology လို့ဆိုရာမှာ hardware နဲ့ software ကို ဆိုလိုပါတယ်)
... အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာ (technology) ဆိုတာ ဘာတွေပါဝင်ပါသလဲ ...
အင်တာနက်ပေါ်မှာသုံးတဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများ (electronic tools) များကို web1.0 and web2.0 ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ e-learning အတွက် အဲဒီကိရိယာများကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ web1.0 ကို information web လို့ဆိုစမှတ်ပြုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ web1.0 tools တွေကို အဓိကအားဖြင့် အင်ဖော်မေးရှင်း (information) ဖြန့်ဝေဖို့အတွက် အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ... အွန်လိုင်းက ဆိုဒ်တခုမှာ အထောက်အကူပြုစာအုပ်စာတမ်းတွေကို ကျောင်းသားတွေအတွက်ထားတာမျိုး။ web2.0 ကိုတော့ social web လို့ ဆိုစမှတ်ပြုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ web2.0 tools တွေကိုအသုံးပြုကြသူတွေကြား နှီးနှောဖလှယ်တာမျိုးတွေ (interaction)၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ အများကြီး ပါဝင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအဖြစ် ... ဘလောဂ့်တွေ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးချိတ်ဆက်ခြင်း (social networking) အတွက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ facebook လိုအရာတွေပါ။ e-learning အတွက် web1.0 & web2.0 tools ကို သုံးနိုင်ပေမယ့်၊ ခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ web2.0 tools တွေကိုပဲ သုံးလာကြပါတယ်။ ဒါကလည်း နည်းပညာပိုင်းအရတိုးတက်လာတဲ့အခါ လူတွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပိုပြီးနှီးနှောဖလှယ်လာကြတာပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲလာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတခုပါ။ (e-learning မှာသုံးတဲ့ web2.0 tools တွေအကြောင်း နောက်ပိုင်းမှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမယ်)
... e-learning ကို ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးနိုင်ပါသလဲ ...
e-learning ကို ပညာရေးပိုင်းမှာသာမက၊ ပရောဖက်ရှင်နယ်ထရိန်နင် (professional training) ပိုင်းမှာလည်း အရင်တည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ပညာရေးပိုင်းမှာတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံတာမျိုးမရှိတဲ့ အဝေးရောက်သင်ကြားရေးပိုင်းမှာ ပိုပြီးအသုံးပြုခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ e-learning ကို ပညာရေးပိုင်းမှာ တွင်ကျယ်စွာအသုံးချလာကြပေမယ့် တချို့သောဘာသာရပ်များဖြစ်ကြတဲ့ ဘာသာစကားပိုင်း၊ စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေမှာ ပိုပြီးအသုံးပြုကြပါတယ်။
... e-learning ဟာ ပညာရေးပိုင်းမှာ အဘယ်ကြောင့် တွင်ကျယ်လာပါသလဲ ...
ကမ္ဘာကြီးမှာခေတ်သစ်နည်းပညာတွေထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှ အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာတွေလည်း ပိုမိုထွန်းကားလာပါတယ်။ အဲဒီကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်း များပြားလာပါတယ်။ အလားတူပဲ kilobits per second လိုနှုန်းမျိုးနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့အင်တာနက်ဟာလည်း ခုဆိုရင် အရမ်းပိုမြန်ဆန်တဲ့ megabits per second နှုန်းမျိုးကိုရောက်နေပါပြီ။ အဲလိုတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေကိုသုံးပြီး တီထွင်ထားတဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်ကိရိယာတွေကိုသုံးပြီး စာလုံး (text) တွေသာမက၊ အသံ (audio)၊ ရုပ် (video)၊ ဓါတ်ပုံ (image) စတာတွေနဲ့ မြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်ကိုသုံးပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ကြ၊ အင်ဖော်မေးရှင်းကို ဖြန့်ဝေဖလှယ်နိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ technology နဲ့ internet ဆိုတာဟာ လူတွေရဲ့ဘ၀တွေထဲမှာ မရှိမဖြစ်ဆိုသလိုဖြစ်လာပါတယ်။
ထိုသို့ ဒီဂျစ်တယ်လ် (digital) ခေတ်ကိုဦးတည်သွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ပြီး Prensky (2001) ဆိုသူက ...
ခုခေတ်လူငယ်တွေကို "Digital Natives - native speakers of the digital language of the computer, video games and internet"
သင်ကြားသူ ဆရာဆရာမများကိုတော့ "Digital Immigrants - those of us who were not born into the digital world but have, at some later point in our lives, become fascinated by and adopted many or most aspects of the new technology" လို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။
Prensky (2001) ဆိုလိုတာကတော့ ခုခေတ်လူငယ်တွေဟာ ဒီဂျစ်တယ်လ်ခေတ်မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာပြီး၊ ဒီဂျစ်တယ်လ်ပိုင်းဆိုင်ရာ technology တွေ၊ အင်တာနက်တွေနဲ့ နဂိုတည်းက အရောတ၀င်ယဉ်ပါးပြီးသားဖြစ်နေသူတွေပါ။ သင်ကြားသူဆရာဆရာမများကတော့ ဒီဂျစ်တယ်လ်ခေတ်မရောက်ခင်မှာ မွေးဖွားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ဒီဂျစ်တယ်လ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုများလာတဲ့အခါ အဲဒီအရာတွေကို တဖြည်းဖြည်းယဉ်ပါးလာပြီး သုံးတတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
digital natives တွေဖြစ်တဲ့ ခုခေတ်လူငယ်တွေကို သူတို့နဲ့ရင်းနီးကျွမ်းဝင်တဲ့ technology and internet ကိုသုံးပြီးတော့ သင်ကြားရေးပိုင်းမှာအသုံးချမယ်ဆိုရင် ထိရောက်နိုင်မယ်လို့ ပညာရေးသုတေသီတွေက တွေ့ရှိလာကြပါတယ်။ အဲဒီတွေ့ရှိချက်နဲ့အတူ technology and internet ကို အသုံးချတဲ့ e-learning ဆိုတာဟာလည်း ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ ပိုမိုတွင်ကျယ်လာပါတယ်။
... e-learning နဲ့ပတ်သက်၍အထင်မှားကြသောအချက်များ ...(E-language wiki)
e-learning ဆိုတာ စာသင်ကြားနည်းစနစ်တခုလို့ အထင်မှားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ e-learning ဆိုတာ နည်းပညာ (technology) နဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးသုတေသီတွေက စာသင်နည်းစနစ် (pedagogy) ဆိုတာဟာ နည်းပညာပိုင်း (technology) ထက်အမြဲဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ ဆိုစမှတ်ပြုကြပါတယ်။ အဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပမာတခုပေးရရင် ...
တချို့ကျောင်းတွေမှာ e-learning ကိုအသုံးပြုကြတဲ့အခါ၊ နည်းပညာပိုင်းကိုဦးစားပေးထားတဲ့ electronic tools တွေကိုသုံးဖို့ ဆရာဆရာမများက သူတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကို လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုပြင်ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ စာသင်နည်းစနစ်ဟာ နည်းပညာပိုင်း (technology) ကိုလိုက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရတာမျိုး ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲလိုနည်းပညာပိုင်းကိုပဲဦးစားပေးတဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေတတ်ကျွမ်းအောင်သင်လေ့ရှိတဲ့ စာသင်နည်းစနစ်တွေကို အသုံးပြုခွင့်မရတော့ပဲ ၊ ရှိနေတဲ့ electronic tools တွေကိုအဆင်ပြေအောင်သုံးဖို့ပဲ ဦးစားပေးလိုက်ရတဲ့အခါ စာသင်နည်းစနစ်တွေက ထိရောက်မှုသိပ်မရှိတော့ပါဖူး။
ဒါကြောင့် e-learning ကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အဓိက သတိထားရမယ့်အချက်က ဘယ် electronic tools ကို သုံးမယ်လို့ အရင်မဆုံးဖြတ်ပဲ၊ စာသင်နည်းစနစ် (pedagogy) ကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ အဲလိုစာသင်နည်းမျိုးရအောင် ဘယ်လို electronics tools ကို သုံးပြီးသင်ရင် ထိရောက်နိုင်မလဲလို့ တွေးရပါမယ်။
ဒုတိယ အများဆုံးအထင်မှားကြတဲ့အချက်ကတော့ e-learning ဆိုတာ “လူတိုင်းအတွက် ၊ နေရာတိုင်း ၊ အချိန်တိုင်း” မှာလုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ အထင်မှားတာပါ။ e-learning ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အဓိကလိုအပ်တာကတော့ အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ နည်းပညာပိုင်း (technology) ဖြစ်တဲ့ ကွန်ပြူတာလိုအီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာနဲ့ အင်တာနက်ပါ။ အဲဒါတွေကိုမရရှိနိုင်တဲ့ (သို့မဟုတ်) အတိုင်းအတာတခုအထိလုံလောက်စွာအသုံးပြုခွင့်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ (အထူးသဖြင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်လည်နေသူတွေမှာ) e-learning အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်တာနက်ဆိုတာ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ ရင်းနီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသူတွေအတွက်လည်း အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အင်တာနက်နဲ့ နည်းပညာတွေဟာ အနောက်နိုင်ငံကဆင်းသက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် အများအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်လိုသာအသုံးအနှုံးတွေများပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မကျွမ်းဝင်သူတွေအတွက်လည်း ကသိကအောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလို အင်တာနက်နဲ့ နည်းပညာပိုင်းသုံးစွဲမှု မတူညီမှုတွေကို digital divide လို့ ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။
တတိယအများဆုံးအထင်မှားကြတဲ့အချက်ကတော့ e-learning ဆိုတာ ဆရာ ဆရာမတွေကို မလိုအပ်ဖူးဆိုတာပါပဲ။ အထောက်အကူစာအုပ်တွေ သင်ခန်းစာဖတ်စာအုပ်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာဖတ်ပြီး “ဒါဆိုရင် ဒါလုပ်” ဆိုပြီး သင်ယူရတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့ e-learning ကိုသုံးရင် ဆရာဆရာမတွေမလိုတော့တာ မှန်ကန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဆရာမတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေကြား သင်ခန်းစာတွေကိုပို့ချရာမှာ “ဒါဆိုရင် ဒါလုပ်” ဆိုတဲ့ တစ်လမ်းသွားမျိုးမဟုတ်ဘဲ ၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်တဲ့သင်ကြားနည်းစနစ်မျိုးမှာတော့၊ e-learning ဟာ အတန်းထဲမှာသင်နေတာအစား၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာသင်တာမျိုးပဲ ပြောင်းလဲသွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် သင်ကြားပေးနေတဲ့ (သို့မဟုတ်) ဂိုက် (guide) လုပ်ပေးနေတဲ့ ဆရာဆရာမတွေရှိနေမှ ကျောင်းသားတွေဟာ electronic tools တွေကို တန်ဖိုးရှိရှိ သူတို့စာသင်ယူရေးမှာ အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နို့မဟုတ်ရင်တော့ ဘလောဂ့်တွေကို လူအများစုအသုံးပြုကြသလို လူမှုဆက်ဆံရေးချိတ်ဆက်ခြင်း (social networking) အတွက်ပဲ အများဆုံးသုံးတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအများဆုံးအထင်မှားကြတဲ့အချက်ကတော့ e-learning ရှိလာတဲ့အခါ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး စာသင်တာမျိုး (face-to-face learning) မလိုအပ်တော့ဖူး ဆိုတာပါပဲ။ e-learning ရော မျက်နှာချင်းဆိုင်စာသင်တာရော သူ့ဘာသာသူကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတဲ့အတွက် ခုနောက်ပိုင်းမှာ ပညာရေးသုတေသီတွေက အဲဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုတချိန်တည်းအသုံးချနိုင်မယ့် blended learning ဆိုတာကို အားသန်လာကြပါတယ်။ Blended learning မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်သင်ကြားရေးမှာ မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို e-learning အနေနဲ့ electronic tools တွေကိုသုံးပြီး သင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ နှစ်ခုလုံးကကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
(အပိုင်း -၂ ကို ထပ်မံဖော်ပြပါမည်)
Holme, B., & Gardner, J. (2006). E-learning: concepts and practice. London: Sage
E-Language. (n.d.) Retrieved April 19, 2009 from E-Language Wiki:
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5). http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
Gibbs, D., & Gosper, M. (2006). The upside-down world of e-learning. Journal of Learning Design, 1(2), 46-54. http://oltfile.qut.edu.au/download.asp? rNum=3055019&pNum=3012689&fac=udf&OLTWebSiteID=JLD&CFID=5871481&CFTOKEN=10386806
ဒီအဖြစ်အပျက်လေး ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဇန်န၀ါရီလမှာလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြေတွေဟာ ပတ်ကြားအက်နေပြီး၊ ခြောက်သွေ့တဲ့ လေတွေကြောင့် ကျွန်မရဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ၊ အိမ်ပေါ်မှာ၊ သစ်ပင်လေးတွေဆီမှာ အ၀ါရောင်ဖုန်မှုန့်လေးတွေ ကပ်လာခဲ့လို့ပါ။ ဒီခုနှစ်လေးဟာ ၁၉၆၈ ခုနှစ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်မ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိနေပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလလေးတွေလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ စစ်ပွဲကာလ နေ့စွဲလေးတွေကို ကျွန်မသေချာ မမှတ်မိတော့ပေမယ့်၊ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးဟာ နေသာတဲ့ နံနက်ခင်းလေး တခုမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဆိုတာကိုတော့ မှတ်မိသတိရနေဆဲ------။
ပေါက်ကွဲသံတွေ ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာ ကျွန်မဟာ တခြားမိသားစုနှစ်စုနဲ့ အတူစုနေနေတဲ့ အိမ်လေးရဲ့ ၀ရန်တာမှာ ထိုင်ရင်း၊ Camara Laye ရေးသားတဲ့ The Africa Childဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ဖတ်နေချိန်မှာပါ။ ကျွန်မရဲ့ စာအုပ်ဟောင်းလေးက စုတ်ပြဲနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ဒီစာအုပ်လေးကိုပဲ ကျွန်မထပ်ဖတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မနေတဲ့ အိမ်လေးရဲ့ အိမ်ရှင်က စစ်မဖြစ်ခင်ကာလတုန်းက ကျွန်မအဖေကို သိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်မရဲ့ မြို့လေး ကျဆုံးသွားချိန်မှာ အထုပ်ကလေးပိုက်ပြီးရောက်လာခဲ့တဲ့၊ ဘယ်သွားလို့ ဘယ်လာရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မကို နေစရာအခန်းငယ်လေးတခု ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအဖေက သူ့အပေါ် အရမ်းကောင်းခဲ့တာကြောင့်လို့ ဆိုပြီး အခန်းခတော့ မယူခဲ့ပါဘူး။
အိမ်မှာရှိတဲ့ တခြားအမျိုးသမီးတွေကတော့ ကျွန်မက ညတိုင်း၊ ညတိုင်း အိမ်ရှင်ရဲ့ အခန်းကို သွားပေးတာကြောင့် အခန်းခပေးစရာ မလိုတာဆိုပြီး၊ အတင်းပြောတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနေ့မနက်က ဒီလိုကျွန်မအကြောင်း အတင်းပြောတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲက အမျိုးသမီးတယောက်လဲ ကျွန်မနဲ့အတူ ၀ရန်တာမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ကျိုးပဲ့နေတဲ့ ကျောက်တုံးလှေခါးလေးမှာထိုင်ပြီး၊ သူမရဲ့ ကလေးငယ်လေးကို ထိန်းနေခဲ့ပါတယ်။ သူမကို ကျွန်မအချိန်အနည်းငယ်ကြာကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ သူမရဲ့ ရင်သားဟာ အရည်တွေ အကုန်လုံး စုပ်ယူခံလိုက်ရလို့ ပိန်ရှုံ့နေတဲ့ လိမ္မော်သီးလိုပဲ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကလေးငယ်လေးကများ နို့ရည်တွေအားလုံးကို စုပ်ယူလိုက်တာလားလို့ ကျွန်မတွေးနေမိခဲ့တယ်။
ပေါက်ကွဲသံတွေလဲ ထွက်လာရော၊ သူမဟာ ကလေးငယ်ကို အမြန်ကောက်ချီလိုက်ပြီး၊ တခြားကလေးတွေကို ခေါ်ဖို့ အိမ်ထဲကို ပြေးဝင်သွားပါတယ်။
ပေါက်ကွဲသံကြီးဟာ မိုးကြိုးပစ်သံကြီးလိုပါပဲ။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိ ဒါဟာ မိုးကြိုးပစ်တာပါလို့ ကျွန်မစိတ်ကူးယဉ်လိုက်မိတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့လေ- စစ်ပွဲတွေ မဖြစ်ခင်တုန်းက ကျွန်မအဖေရဲ့ အိမ်လေးဆီကို ကျွန်မပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ။ ခြံဝန်းကြီးထဲက သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာ မိုးရွာလာတာကို စောင့်နေရသလိုပါပဲ။ ကျွန်မအဖေရဲ့ ခြံဝန်းထဲမှာ စားပင်၊ သီးပင်တွေက အစုံပဲ ရှိတာလေ။ သစ်ပင်ကြီးတွေပေါ်ကို တက်ရတာ ကျွန်မအရမ်းကြိုက်တာပဲ။ အဖေကတော့ ပြောတတ်တယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ သစ်ပင်တက်တာ မကောင်းဘူးတဲ့။ သူ့ဆီကို ၀ိုင်ပုလင်းယူလာမယ့် ယောက်ျားလေးတချို့က ကျွန်မ ယောက်ျားလေးလို ပြုမူနေတာကို တွေ့ရင် စိတ်ပြောင်းသွားမှာ စိုးရတယ်တဲ့။ အဖေက စနောက်ပြီး ပြောခဲ့တာပါ။ ကျွန်မကို ဆူတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဖေဟာ ကျွန်မသစ်ပင်တက်တာကိုတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ အဖေဟာ ကျွန်မကို ပျက်စီးအောင် အလိုလိုက်တာပါလို့ တချို့က ပြောကြပါတယ်။ အခုအချိန်ထိ တချို့အမျိုးတွေက ကျွန်မဒီအချိန်အထိ အိမ်ထောင်မပြုပဲ နေတာဟာ အဖေ့ကြောင့်ပါလို့ ပြောနေကြတုန်းပဲ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီနေ့နံနက်ကတော့ မိုးကြိုးပစ်သံလို ပေါက်ကွဲသံကြီးတွေဟာ တစတစနဲ့ ပိုမိုကျယ်လောင်လာခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကလေးလေးတွေနဲ့ တူတူ ထွက်ပြေးကြပါလေရော။ ကျွန်မလဲ သူတို့နဲ့ တူတူ ပြေးချင်နေပေမယ့်၊ ကျွန်မရဲ့ ခြေထောက်တွေက မရွေ့ဘူးဖြစ်နေခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ ဒီအသံတွေကို ကျွန်မကြားရတာ ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ စစ်ဖြစ်နေတာ နှစ်နှစ်တောင်ရှိသွားခဲ့ပြီ။ ကျွန်မမိဘတွေလဲ အုကီက ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ သေသွားခဲ့ပြီ။ ကျွန်မအဒေါ်လဲ အိုကီဂျာမှာ သေသွားခဲ့ပြီ။ ကျွန်မအဘိုးအဖွားတွေနဲ့ ၀မ်းကွဲတွေလဲ နက်ကိုဈေးကို ဗုံးချဲတုန်းက အာပါကနားမှာ သေသွားခဲ့ပြီ။ အဲဒီတုန်းကလေ၊ ဗုံးဒဏ်ကြောင့် ကျွန်မအဖေအိမ်ခေါင်မိုးကြီး ပျက်စီးသွားတာ၊ ကျွန်မတယောက်ထဲ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ့နေ့မနက်မှာ ပေါက်ကွဲသံကြီးတွေကို ကြားရတာ ပထမဆုံးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
ဟော- ပေါက်ကွဲသံကြီး ထပ်ထွက်လာပြန်ပြီ။ ကျွန်မရပ်နေတဲ့ မြေပြင်ဟာ တုန်ဟဉ်းသွားသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မပြေးလို့ မရသေးပြန်ဘူး။ အသံဟာ ကျယ်လောင်လွန်းလို့ ကျွန်မခေါင်းတွေ မူးနောက်သွားတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ နားထဲကို အရမ်းပူုတဲ့ အရည်တွေ တစုံတယောက်က လာလောင်းထည့်နေသလိုပဲ ခံစားနေရတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်မဘေးက မြေပြင်မှာ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ အရမ်းကြီးတဲ့ အပေါက်ကြီးတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ မီးခိုးတွေအူနေတာ၊ သစ်သားစတွေ၊ ဖန်စတွေ၊ သံစတွေ လေထဲမှာ ၀ဲပျံနေတာကို ကျွန်မတွေ့နေရတယ်။ ဖုန်လုံးတွေ လိမ့်တက်လာတာကို မြင်နေရတယ်။ ကျွန်မအားလုံးကို မမှတ်မိတော့ဘူး။ မိနစ်အတန်ကြာလောက် ကျွန်မရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ ဒီဗုံးတွေဟာ ကျွန်မကိုပါ အဆုံးသတ်လိုက်ပါစေတော့လို့ ကျွန်မဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ကျွန်မဘာတွေထပ်လုပ်လဲဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ထိုင်လိုက်မိသလား၊ မြေပေါ်မှာ မှောက်လိုက်မိသလား။ ကျွန်မမမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗုံးတွေ ရပ်သွားချိန်မှာတော့ ဒဏ်ရာရသူတွေနားမှာ ၀ိုင်းအုံနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးရှိရာ လမ်းပေါ်ကို ကျွန်မလျှောက်သွားလိုက်မိတယ်။ နောက်တော့ မြေပေါ်မှာ လဲနေတဲ့ ဒဏ်ရာရသူတယောက်ကို ကျွန်မအာရုံစိုက်လိုက်မိတယ်။ ကောင်မလေး တယောက်ပါ။ အသက် ဆယ့်ငါးနှစ်လောက် ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူမရဲ့ လက်မောင်းတွေကနေ သွေးတွေထွက်နေတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ ဟာသလုပ်ရမယ့် အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒဏ်ရာနဲ့ ဒီကလေးမလေးကို မြင်ရတာ ပိုးတုန်းလုံးကောင်လေးနဲ့ တူနေတယ်။ ဒီကလေးမလေးကို ကျွန်မအိမ်ကို ဘာကြောင့် ခေါ်လာခဲ့မိလဲ။ ကျွန်မမသိပါဘူး။
ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ကလဲ ဒီလိုပဲ ဗုံးကြဲခံရတာတွေ ဖြစ်နေခဲ့တာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မရောက်နေခဲ့တဲ့နေရာက မြို့တော်ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒဏ်ရာရသူတွေကို ကူညီပေးတာ၊ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးတာတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ကျွန်မအခန်းလေးဆီကိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မသယ်လာခဲ့ဖူးပါဘူး။ အခုကျွန်မခေါ်လာခဲ့တဲ့ ကလေးမလေး နာမည်ကတော့ ချီနာဆာ တဲ့။
ကျွန်မသူ့ကို ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ရှောက်ပြုစုခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရှင်ကလဲ အကူအညီပေးခဲ့သလို၊ အတင်းပြောတတ်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေ လာပေးတတ်ကြပါတယ်။ သူမဟာ ပိန်ပိန်လေးပါ။ အရွယ်နဲ့စာရင် တော်တော်သေးကွေးတယ်လို့လဲ ဆိုရပါမယ်။ စစ်မက်ကြားက ကလေးလေးတွေ ဘ၀ဟာ ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူမဟာ တဘက်သားမျက်လုံးကို သေချာပြန်စိုက်ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ မယဉ်ကျေးတဲ့ အမူအရာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီအမူအကျင့်ဟာ သူမအရွယ်ထက် ပိုကြီးသယောင် ဖြစ်နေတတ်တယ်။ သူမရဲ့ဒဏ်ရာလေးတွေကို အိမ်လုပ်အရက်ပျံနဲ့ ဆေးကြောပေးတဲ့အခါတိုင်း သူမဟာ မနာကျင်ဟန်ဆောင်နေတတ်ပေမယ့် မျက်ဝန်းလေးတွေထဲက မျက်ရည်စလေးတွေကိုတော့ ကျွန်မမြင်နေခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မလဲ သူမရဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ ရင့်ကျက်လာမှုလေးတွေ၊ စစ်မက်ကာလမှာ အရမ်းမြန်လာတာကို ကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျမိတာပါပဲ။
ချီနာဆာက ကျွန်မကို ကျေးဇူးတင်စကားအမြဲဆိုတတ်တယ်။ ကျွန်မချက်ပြုတ်တာ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကို ကူညီနိုင်ဖို့အချိန်တွေကို မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့ သူမပြောလေ့ရှိတယ်။ ညနေခင်းအချိန်လေးတွေဆို၊ သူမကို ညစာကျွေးပြီးတိုင်း၊ သူမဘေးမှာထိုင်ပြီး၊ ကျွန်မစာဖတ်ပြလေ့ရှိတယ်။ သူမရဲ့လက်လေးတွေဟာ ပတ်တီးတွေနဲ့ ငြိမ်သက်နေပေမယ့် သူမရဲ့ မျက်နှာမှာတော့ ခံစားမှုအရိပ်အယောင်လေးတွေ ပေါ်ထွက်နေတယ်ဆိုတာ ရေနံဆီမီးအိမ်ရဲ့ မှုန်ပျပျအလင်းရောင်လေးမှာ ကျွန်မတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်မစာဖတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာ ပြုံးနေ၊ ရယ်နေလေ့ရှိတယ်။
စစ်ပွဲကာလမှာ တမြို့နေတမြို့ပြောင်းရင်း ကျွန်မရဲ့ ပစ္စည်းတွေ အများအပြား ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်လေးတချို့ကိုတော့ ကျွန်မရအောင် သယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီစာအုပ်လေးတွေကို သူမကို ဖတ်ပြရတာ ကျွန်မသိပ်ဝမ်းသာတာပဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ချီနာဆာရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေကနေတဆင့် ဒီစာအုပ်လေးတွေရဲ့ သစ်လွင်တောက်ပမှုကို ကျွန်မမြင်တွေ့နေရလို့ပါ။ သူမဟာ မေးခွန်းလေးတွေ စမေးလာတယ်။ ပုံပြင်တွေထဲက ဇာတ်ကောင်လေးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေအပေါ်မှာ စိန်ခေါ်ဆန်းစစ်လာတယ်။ စစ်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးလာတယ်။ ကျွန်မရဲ့အကြောင်းတွေ မေးလာတယ်။ ကျွန်မက ကျွန်မကို ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်စေရမယ်လို့ စိတ်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့၊ ဆရာဖြစ်ကောလိပ်ကျောင်းကို ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေအကြောင်း ပြောပြတယ်။ စစ်မဖြစ်ခင်တုန်းက ဆရာမလုပ်ခဲ့ရတာလေးကို ကျွန်မဘယ်လောက် ၀မ်းသာမိတယ်ဆိုတာ၊ ကျွန်မရဲ့ ကျောင်းလေး စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းလေး ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ကျွန်မဘယ်လောက် ၀မ်းနည်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကို ပြောပြခဲ့တယ်။ သူမက ကျွန်မကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်နေခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းညနေပိုင်းတခုမှာ သူမက ကျွန်မကို ကစားနည်းတခုသင်ပေးပြီး၊ မြေကြီးပေါ်က သေတ္တာလေးတွေအကြားမှာ ကျောက်တုံးလေးတွေ ရွှေ့ဖို့ ပြောရင်း သူမကို စာဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာ သင်ပေးမလားလို့ ကျွန်မကို မေးလာခဲ့တယ်။ ကျွန်မမှင်သက်မိသွားတယ်။ သူမစာမဖတ်တတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မ မသိခဲ့ဘူး။ အခုတော့ ကျွန်မစဉ်းစားရတော့မယ်။ ကျွန်မတဘက်သားအကြောင်းကို သေချာမသိပဲ ကြိုတင်သုံးသပ်ချက် လုပ်ဖို့ မသင့်ခဲ့ဘူး။ သူမရဲ့ ဘ၀လေးကတော့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ အနေအထားအတိုင်းပါပဲ။ သူမရဲ့ မိဘတွေက အဂုလာက လယ်သမားတွေ။ သားနှစ်ယောက်ကို သာသနာပြုကျောင်းကို ပို့ပေးခဲ့ပေမယ့်၊ သူမကိုတော့ အိမ်မှာပဲ ထားခဲ့ကြတယ်။ သူမဘယ်အရပ်ကလာလဲဆိုတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို တွေးဖို့ ကျွန်မမေ့ခဲ့တာကတော့ သူမရဲ့ ဖြတ်လတ်မှု၊ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုနဲ့ တက်ကြွမှုတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီနေ့ညမှာပဲ ကျွန်မတို့ သင်ခန်းစာတွေ စခဲ့ကြတယ်။ သူမက သင်ပုန်းကြီးကို သိပြီးသား။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူမအစ်ကိုတွေရဲ့ စာအုပ်တွေကို ကြည့်ခဲ့ဖူးလို့ပါပဲ။ သူမလေ့လာသင်ယူတာ အရမ်းမြန်တာ၊ အရမ်းကြိုးစားတာတွေကိုတော့ ကျွန်မ မအံ့သြတော့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းလအတန်ငယ်ကြာမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ လက်နက်ချတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလ သတင်းလေးတွေ ပျံ့နှံ့လာချိန်မှာတော့ သူမဟာ The African Child ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ကျွန်မကို ဖတ်ပြနေခဲ့ပါပြီ။
စစ်ကြီးပြီးသွားတဲ့နေ့မှာ၊ သူမနဲ့ ကျွန်မတို့တတွေ အတင်းပြောတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ အိမ်အောက်ထပ်က အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ အတူစုမိသွားပြီး ငိုယိုကြ၊ သီချင်းတွေ ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ရယ်မောကခုန်ခဲ့ကြတယ်။ ငိုနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ မသေချာမရေရာမှု၊ စိတ်ချမ်းသာရာရမှုတွေကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ မျက်ရည်လေးတွေ ပြည့်လျှံနေခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မတို့တွေလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲရှင်။ နောက်ပြီး ကျွန်မဆီမှာ ငိုစရာ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာ တခုကလဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ချီနာဆာကို ကျွန်မအိမ်လေးဆီ ခေါ်သွားချင်တယ်။ ကျွန်မဘ၀မှာ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ သမီးလေး ဖြစ်စေချင်တယ်။ စစ်မက်ကြောင့် ချစ်ခင်သူတွေအားလုံးနဲ့ သေကွဲကွဲသွားခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မဘ၀နဲ့တူတူ မျှဝေခံစားစေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူမက ကျွန်မကို လှမ်းဖက်ထားရင်း၊ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဆွေမျိုးတွေကျန်ရစ်ဦးမလားဆိုတာကို သူမသွားရှာချင်တယ်တဲ့။
ကျွန်မရဲ့ လိပ်စာနဲ့ ကျွန်မအလုပ်ပြန်ဝင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ကျောင်းလေးရဲ့ အမည်ကို သူမကို ကျွန်မပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မဆီမှာရှိနေတဲ့ ငွေစလေးတွေကိုလဲ သူမကို ကျွန်မပေးလိုက်တယ်။ သူမက ပြောတယ်။ မကြာခင်မှာ ကျွန်မဆီပြန်လာတွေ့မယ်တဲ့။ မျက်ရည်တွေ ပြည့်လျှံနေတဲ့ ကျေးဇူးတင် မျက်ဝန်းလေးနဲ့ သူမက ကျွန်မကို လှမ်းကြည့်တယ်။ ကျွန်မသူ့ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်တွယ်ထားမိတယ်။ နောက်ပိုင်းအချိန်ကာလတွေအတွက် ၀မ်းနည်းမှုကိုလဲ ကျွန်မရင်ထဲမှာ ခံစားနေရတယ်။ သူမရဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို ပြန်တွေ့ပြီး၊ သူမဘ၀အတွက် ကောင်းမွန်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေရသွားမှာပါ။ သူမကျွန်မဆီကို ဘယ်တော့မှ ပြန်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(၂၀၀၈) ခုနှစ်ကာလရဲ့ တမြန်နေ့ မနက်ခင်းမှာပါ။
အဲဒီမနက်ခင်းလေးကတော့ ဟိုး- လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်တုန်းက နံနက်ခင်းလေးနဲ့ မတူတော့ပါဘူး။ ကျွန်မအိမ်ထဲက ဧည့်ခန်းလေးထဲမှာ ဂါဒီးယန်း သတင်းစာလေးကို ကျွန်မ စလှန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ နံနက်ခင်းလမ်းလျှောက်တာလေးကနေ ပြန်လာခါစပါ။ ကျွန်မမိတ်ဆွေတွေက ပြောပါတယ်။ ကျွန်မအရွယ် အသက်ခုနစ်ဆယ်ကျော်လို့ မထင်ရတာ ကျွန်မနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်လို့တဲ့။ သတင်းစာထဲမှာ အစိုးရက ၀န်ကြီးအသစ်တွေ ခန့်အပ်တဲ့ သတင်းပါလာပါတယ်။ အစိုးရဦးဆောင်မှု တခုကနေ တခု ပြောင်းနေကျဖြစ်နေပြီမို့ သိပ်မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သတင်းစာထဲမှာ အသစ်ခန့်လိုက်တဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဟာ အမျိုးသမီးဆိုတာကို ကျွန်မတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမရဲ့ ပထမဆုံးအင်တာဗျူးတောင် ပါလာခဲ့ပြီပဲ။ ကျွန်မကျေနပ်သွားတယ်။ အစိုးရထဲမှာ ကျွန်မတို့ အမျိုးသမီးတွေလဲ လိုအပ်တယ်။ နိုက်ဂျီးရီးယားမှာတုန်းက အမျိုးသမီး ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဘယ်လောက်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လဲ ဆိုတာ ကျွန်မတို့ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရပြီးပြီ။
နောက်တော့ သတင်းစာ၊ စာမျက်နှာ တ၀က်ကို နေရာယူထားတဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးအမျိုးသမီးရဲ့ အဖြူအမည်းဓာတ်ပုံကို ကျွန်မတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမရဲ့ မျက်နှာကို ကျွန်မသိပ်ရင်းနှီးနေသလိုပဲ။ ကျွန်မသူမကို စိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ သူမနာမည်ကို မဖတ်မိခင်ကတည်းက ဒါဟာ ချီနာဆာဆိုတာ ကျွန်မသိလိုက်ရပါပြီ။ သူမရဲ့ ပါးလေးတွေက ပြည့်ဖောင်းလာပြီ။ ငယ်ရုပ်သွင်ပြင်လေး နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်။
သူမရဲ့ အင်တာဗျူးကို ကျွန်မအမြန်ဖတ်လိုက်မိတယ်။ ကျွန်မလက်တွေ နည်းနည်းတုန်နေတယ်။ စစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သိပ်မကြာခင်မှာပဲ စစ်ပွဲကြောင့် ထိခိုက်ခံစားကြရတဲ့ လူငယ်တွေကို ကူညီတဲ့ နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအကူအညီနဲ့ သူမနိုင်ငံခြားကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။ သူမစကောလားရှစ်တွေ အများကြီးရခဲ့တယ်။ သူမအိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ကလေးသုံးယောက်ရှိတယ်။ သူမ စာပေပိုင်းဆိုင်ရာ ပါမောက္ခ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူမစာအုပ်တွေကို ဘယ်လိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့လဲဆိုတာကို ပြောကြားတာ ဖတ်ရချိန်မှာတော့ ကျွန်မလက်တွေ အရမ်းကို တုန်နေခဲ့ပါတယ်။ စစ်ပွဲအတွင်းတုန်းက သူမမှာ နတ်သမီးလို အမေ တယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သူမဒီစကားလေးကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူမမျက်နှာလေးကို ကျွန်မအချိန်တန်ကြာ ကြည့်နေမိခဲ့တယ်။ သူမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀လေးကို ကျွန်မပြန်မြင်ယောင်နေမိတယ်။ ပြီးတော့ သူမနဲ့ အတူတူ ကစားခဲ့ရတဲ့ အချိန်လေးတွေ။ သတင်းစာကို ပိတ်ပြီး၊ ဘေးမှာ မချထားခင် အချိန်လေးမှာတော့ ကျွန်မဘ၀မှာ တခါမှ မခံစားဖူးခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မှုတွေကို ခံစားနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်မပဲ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါလေ။
မူရင်းစာရေးသူ- Chimamanda Ngozi Adichie
Adichie, C.N. (2009) “Chinasa” in The Thing around Your neck, Fourth Estate